Ii-FAQ | I-Hangzhou Dro Textile Co, Ltd.
Ndingakhawuleza kangakanani ukufumana ixabiso?
Sihlala sicaphula ngaphakathi kweeyure ezingama-24 emva kokuba sikufumene.
Ngokufanelekileyo, i-MOQ yethu ixhomekeke kwisixa sakho.
Ngaba unokwenza uyilo lwethu okanye ubeke ilogo yethu kwimveliso?
Ewe, sinesebe lethu le-R & D, sinokwenza uyilo lwakho okanye sibeke uphawu lwakho kwimveliso, nceda uthumele uyilo lwakho okanye ubuze kwi-imeyile yethu (iWhatsapp okanye i-Skype) .Ungasithumela iisampulu zakho.
Isampulu inokufuna imveliso yeentsuku ezi-5 ~ 15.
Ukuba ukhetha nje isampulu esele ikho. singakuthumela isampulu ngosuku olulandelayo, singakuthumelela isampulu yasimahla kwaye umrhumo wokutsalwa uya kuhlawuliswa, kodwa uya kubuyiselwa emva komyalelo wendawo.
Lithini ixesha lokuhanjiswa kwendwangu kaMinimatt?
Iimpahla zifuna iintsuku eziyi-10-30 zenziwe, zixhomekeke kubungakanani, kwaye ziya kuba yimveliso emva kokufumana idiphozithi.
Imirhumo yesampulu okanye nayiphi na imali encinci, ungayithumela kwiakhawunti yethu yokuhlawula. Kwiiodolo eziqhelekileyo, siyayamkela idiphozithi ye-T / T 30%, intsalela ekufuneka ihlawulwe ikhuphela i-B / L.
D / P, L / C yamkelekile, kodwa kunjalo sikhetha i-T / T, ekulula kakhulu kuthi sobabini.
Ndingatyelela umzi-mveliso wakho okanye i-ofisi?
Ngokuqinisekileyo, wamkela naliphi na ixesha. Kananjalo sinokulungiselela ukucholwa kwisikhululo seenqwelomoya saseHangzhou Xiaoshan nakwisikhululo.